08/24/14 ~ MM Daily Star
ဘရူနိုင်း ဘုရင့်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲတွင် ဗီယက်နမ် အသင်း...
အောင်ပွဲနဲ့ ပြန်လာတဲ့ မြန်မာ ဘောလုံး U 19 အားဂုဏ်ြ...
၁၁ နှစ်အရွယ် မိမိသမီးအား မကြာခဏလိင်ဆက်ဆံသူကို မတား...
အမေ့ကို သတိရတယ်ဟု မကြာခဏပြောတတ်သူ ရဲတပ်သားတစ်ဦး အ...
ခေါင်းလောင်းတစ်လုံးဟာ ဘာကြောင့် အသံမမြည်တာလဲ
မြန်မာနိုင်လို့ မပျော်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ ...
အာဏာရ စစ်အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံ Nld
ထုံးစံအတိုင်း … ကြိုတင်စီစဉ်ပြီး တိုက်တာ …
ဘရူနိုင်း ဘုရင့်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲတွင် ဗီယက်နမ် အသင်းကို ခြေစွမ်းပြပြီး ထိုက်ထိုက်တန်တန် အနိုင်ရဗိုလ်စွဲခဲ့သည့် မြန်မာ လူငယ် ယူ၁၉ အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းအား ပြည်သူများ ကြိုဆို ( ဓါက်ပုံများ )
20:26 အားကစား ဘောလုံး No comments
အောင်ပွဲနဲ့ ပြန်လာတဲ့ မြန်မာ ဘောလုံး U 19 အားဂုဏ်ပြုငွေများ ချီးမြင့်
20:09 အားကစား ဘောလုံ3းcomments
ဘရူနိုင်း ဘုရင့်ဖလား ဗိုလ်လုပွဲတွင် ဗီယက်နမ် အသင်းကို ခြေစွမ်းပြပြီး ထိုက်ထိုက်တန်တန် အနိုင်ရဗိုလ်စွဲခဲ့သည့် မြန်မာ လူငယ် ယူ၁၉ အမျိုးသား ဘောလုံး အသင်းအား ရဟန်းရှင်လူ မိဘပြည်သူများမှ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုသည့် အနေဖြင့် ဂုဏ်ပြုဆုငွေများ ဆက်သွယ်ပေးအပ်လျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်သို့ ယခုအထိ ဆက်သွယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြသည့် ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်သူများ စာရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ - (USD 4300)
၂။ အားကစား ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း- ကျပ် သိန်း၂၀၀
၃။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် နာယက ဦးအောင်ကိုဝင်း- ကျပ် သိန်း ၃၀၀
၄။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် နာယက ဦးတေဇ - ကျပ် သိန်း ၃၀၀
၅။ ရတနာပုံ အသင်းပိုင်ရှင် ဒေါက်တာ စိုင်းဆမ်ထွန်း - ကျပ် သိန်း၃၀၀
၆။ ဦးဇော်ဝင်းရှိန် (ဧရာဝတီ ယူနိုက်တက်)- ကျပ် သိန်း ၁၀၀
၇။ ဦးလှမျိုး (အောင်မြင်သူ) - ကျပ် သိန်း ၁၀၀
၈။ ဦးအောင်မြတ် - ကျပ် သိန်း ၁၀၀
၉။ ဦး ရန်ဝင်း - ကျပ်သိန်း ၁၀၀
၁၀။ ဦးမြဟန်- ကျပ်သိန်း ၂၀
၁၁။ ဦးဇော်မင်း- ကျပ်သိန်း ၅၀
၁၂။ ဒေါ်ချိုချိုလွင်- ကျပ် ၂၅ သိန်း
၁၃။ ဒေါက်တာ မောင်မောင်အေး- ကျပ် ၁၀ သိန်း
၁၄။ မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး- ကျပ် ၁၀ သိန်း
၁၅။ ပြေတီဦး - ကျပ် ၁၀ သိန်း
၁၆။ ဦးအောင်သန်းမြင့်+ဒေါ်ယုယုဝင်း - ကျပ် ၁၀ သိန်း
၁၇။ ဒေါ်မြတ်မြတ်ဦး - ကျပ် ၁၀ သိန်း
၁၈။ မနန္ဒာ ဝေဒီ - ကျပ် ၁၀ သိန်း
၁၉။ ဦးအေးဝင်း+ ဒေါ်မီးမီး - ကျပ် ၅ သိန်း
၂၀။ ဦးအောင်လင်း - ကျပ် ၁၀ သိန်း
၂၁။ ဦးမျိုးသိန်း - ကျပ် ၁၀ သိန်း
၂၂။ ဦးဇော်မင်းဦး - ကျပ် ၁၀ သိန်း
၂၃။ ဦး ကိုကိုအောင် - ကျပ် ၁၀ သိန်း
၂၄။ ဦး ရဲထွဋ် - ကျပ် ၁၀ သိန်း
၂၅။ ကို ဘိုဘို - ကျပ် ၁၀ သိန်း
၂၆။ ဦးအောင်ကျော်မိုး - ကျပ် ၁၀ သိန်း
၂၇။ ကိုကျော်လင်း+ မချောရတနာ - ကျပ် ၅ သိန်း
၂၈။ ကိုစိုးညီညီ- ကျပ် ၅ သိန်း
၂၉။ ဦးအိုက်လျှံ- ကျပ် ၅ သိန်း
၃၀။ ဒါရိုက်တာ ၀ိုင်း - ကျပ် ၁ သိန်း
၃၁။ ဦးအောင်ခိုင် - ကျပ် ၁ သိန်း
၃၂။ ဦးမျိုးသူရ - ကျပ် ၁၀ သိန်း
၃၃။ ဦးမောင်မောင် - ကျပ် ၁၀ သိန်း
၃၄။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော် - ကျပ် သိန်း ၃၀၀
၃၅။ ဇွဲကပင် အသင်းပိုင်ရှင် ဦးလှဌေး - ကျပ် သိန်း ၁၀၀
(ဂုဏ်ပြုဆုငွေများ ဆက်လက်ချီးမြှင့်ကြရန်ရှိသည့်အတွက် ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားပါမည်)
၁၁ နှစ်အရွယ် မိမိသမီးအား မကြာခဏလိင်ဆက်ဆံသူကို မတားသည့်အပြင် ကိုယ်ဝန်ရှိလာမှ ငွေညှစ်သောမိခင်
15:30 သောက်တစ်လွဲ လုပ်ရပ်များ, နိုင်ငံတစ်ကာ သတင်း No comments
အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးသည့် သမီးငယ်၏ လိင်မှုကိစ္စကို တားမြစ်ခြင်း မရှိသည့် အပြင် ကိုယ်ဝန် ရှိလာချိန်တွင် ငွေညှစ်ခဲ့သည့် မိခင်ဖြစ်သူကို ရဲတပ်ဖွဲ့ စွဲချက်တင်ကာ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်လျှက် ရှိသည်။
နယူတန် မြို့တွင် နေထိုင်သည့် အသက် ၃၇ နှစ် အရွယ် မစ္စစ် ဒူးရန့်သည် အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးသည့် သမီးငယ်နှင့် ယင်းတို့ မိသားစု မိတ်ဆွေ ဂျက်ကော့ဝှိုက်တို့၏ လိင်ကိစ္စများကို သိသော်လည်း မျက်ကွယ်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် သမီးငယ် ကိုယ်ဝန်ရှိလာ ခဲ့ချိန်တွင် ဂျက်ကော့ဝှိုက် ကို ငွေညှစ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အသက် ၂၄ နှစ် ရှိပြီဖြစ်သည့် ၀ှိုက်သည် ယင်းထက် အသက်ထက်ဝက်ခန့် ငယ်သူ မိန်းကလေးငယ်နှင့် ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီနှင့် မေလများတွင် မိန်းကလေး၏ အိပ်ခန်းအတွင်း တောက်လျှောက် အိပ်စက် ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ရဲမှတ်တမ်းများ အရ မိန်းကလေးက ဂျက်ကော့ဝှိုက်၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားမှုများကို မိခင်ဖြစ်သူထံ ပြောကြားခဲ့ သော်လည်း မိခင်က နားမထောင် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကိစ္စ အတွက် မစ္စစ် ဒူးရန့်ကို လက်ရှိတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ထားခြင်း မရှိသေး သော်လည်း သမီးငယ်နှင့် အဆက်အသွယ် မလုပ်ရန် တားမြစ်ထားသည်။
အိမ်နီးချင်း မျက်မြင် သက်သေ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဂေါ်ဒွန်ဂျုံးစ်က ငွေညှစ်ခဲ့သည့် မစ္စစ် ဒူးရန့်၏ အပြုအမူအား အံ့အား သင့်စရာ မရှိကြောင်း ဆိုသည်။ “ဒီလိုဖြစ်တာ ဘာမှ အံ့အားသင့်စရာ မရှိဘူးဗျ။ သူတို့အိမ်လောက် အ၀င်အထွက် ရှုပ်တဲ့အိမ် ရှိမယ် မထင်ဘူး။ လူတွေက ၀င်ချင်တိုင်း ၀င်၊ ထွက်ချင်တိုင်း ထွက်နေကြတာ။ ဘယ်သူက ဘယ်အချိန် ၀င်သွားလဲ၊ အချိန်တော်လား၊ အချိန်မတော်ဘူးလား၊ မသိနိုင်ဘူးဗျ”ဟု ပြောသည်။
မိန်းကလေးမှာ လက်ရှိတွင် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး အရွယ်မတိုင်မီ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ခြင်းကြောင့် အန္တရာယ် ရှိနေသည်။ မိန်းကလေးကို ကိုယ်ဝန်ရှိစေ ခဲ့သူ ဂျက်ကော့ဝှိုက်မှာမူ တတိယအဆင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလွဲသုံးမှုဖြင့် တရားစွဲဆို ခံထားရသည်။
Ref: Daily Mail, whotv.com, newtondailynews
အမေ့ကို သတိရတယ်ဟု မကြာခဏပြောတတ်သူ ရဲတပ်သားတစ်ဦး အမေသီချင်းဖွင့်ကာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေ
15:29 မှုခင်း သတင်းများ No comments
မွန်ပြည်နယ် ရေးမြို့နယ်၊ မြို့မ ရဲစခန်းအပိုင် ဇီးဖြူသောင် ရဲကင်းရှိ နေအိမ်လိုင်းခန်း အတွင်း စာတစ်စောင်ရေးသားခဲ့ပြီးနောက် ရဲတပ်သား တစ်ဦးက မိမိကိုယ်ကို သေနတ်ဖြင့်ပစ်ကာ အဆုံးစီ ရင်မှုတစ်ခု သြဂုတ်၂၁ရက် ည၆း၃ဝနာရီ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း ရေးမြို့နယ်ရဲစခန်းမှ သိရသည်။
''သေသူ ရဲတပ်သားရဲ့ဘေးမှာ ဝဋ်ကြွေးရှိ ရင် ဒီဘဝဒီမျှသာကျေပါစေ ဘုရားဆိုပြီး စာရွက်နဲ့ရေး ပြီး ချထားတာတွေ့ပါတယ်။ ကျည်ဆံကမေးရိုးကိုဖောက် ပြီး ဦးခေါင်းနောက်စေ့ပွင့်ထွက်သွားခဲ့တာပါ''ဟု ရဲတပ် ကြပ်တစ်ဦးက ပြောသည်။
မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သူသည် ရဲတပ်သား အောင်ကိုမြင့်ဆိုသူဖြစ်ပြီး အသက်၂၆နှစ်ရှိကြောင်း၊ ၄င်းသည် ရဲတပ်သား ဆန်းနိုင်ဆိုသူနှင့် ကင်းလဲပြီး နောက် M22 သေနတ်တစ်လက်၊ ကျည် ၂ဝတောင့်နှင့် အတူ ၄င်း၏နေအိမ်လိုင်းခန်းသို့ထွက်သွားခဲ့ပြီး ခဏ အကြာ ၄င်း၏နေအိမ်လိုင်းခန်းအတွင်းမှ သေနတ်သံ တစ်ချက်ကြားသဖြင့် စခန်းမှတာဝန်ရှိသူများသွားရောက် ကြည့်ရှုရာမှ အိပ်ရာပေါ်တွင် ပက်လက်အနေအထား ဖြင့် သေနတ်ပိုက်ပြီး လည်မျိုတွင်သေနတ်ထိမှန်ဒဏ်ရာ တစ်ချက်ဖြင့် သေဆုံးနေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရခြင်းဖြစ် သည်။
အဆိုပါရဲတပ်သား အောင်ကိုမြင့်သည် ၂ဝ၁၄ခုနှစ်စပိုင်းမှစတင်၍ မော်လမြိုင်မြို့ ယာဉ်ထိန်း တပ်ဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ရေးမြို့မ ရဲစခန်းအပိုင် ဇီးဖြူသောင်ရဲကင်း၌ သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
''ရွာမှာတော့ အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ သူမသေခင် ကျွန်တော်သိရတာက အမေကို သတိရကြောင်း ပြောတတ်တယ်။ နောက်ပြီး အမေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သီချင်းတွေ အမြဲတမ်းဖွင့်ထားတယ်။ သေချိန်မှာတောင် အဲဒီသီချင်း ဖွင့်ရက်သားပါ။ ကျွန်တော် ကြားပါတယ်'' ဟု ဇီးဖြူသောင်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ရဲတပ်သားအောင်ကိုမြင့်သည် ဘီးလင်းမြို့နယ် ဇုတ်သုတ်ကျေးရွာဇာတိ ဖြစ်ပြီး အလောင်းအား ရေးမြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ပို့အပ်ကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ခုံရုံး ဖွဲ့စည်း စစ်ဆေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင် မှုကို အမှုဖွင့်လှစ်ထားခြင်းမရှိဟုမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
15:28 အထွေထွေ ဗဟုသုတ No comments
အထက်ပါ မေးခွန်းကိုဖြေပေးသူကတော့ မန္တလေး တမ္ပဝတီ ကြေးသွန်းရပ်မှ ပြူခေတ်သမိုင်း
သုတေသီ၊ မြန်မာမှုပညာရှင်၊ လက်ရှိ ကြေးသွန်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေသူ ဆရာကြီး တမ္ပဝတီဦးဝင်းမောင် ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလောက်အောင် ကြေးသွန်းပညာဟာ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာမှ မန္တလေးတမ္ပဝတီရပ်၊ တမ္ပဝတီရပ်မှာမှ ဦးဝင်းမောင်အပါအဝင် ကြေးသွန်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ မိသားစု သုံးစု၊ ဆရာကြီးသုံးဦးသာ ကျန်ပါတော့တယ်။ အဲဒီဆရာကြီး သုံးဦးသာ မရှိလျှင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြေးသွန်းပညာ တိမ်ကော သွားနိုင်ပါပြီ။
ဒါတွေထားလို့ မူလ မေးခွန်းဖြစ်တဲ့ ခေါင်းလောင်းတစ်လုံးဟာ ဘာကြောင့် အသံမမြည်တာလဲ ဆိုတာကို ဆရာဦးဝင်းမောင်က ဒီလိုဖြေပါတယ်။
" ခေါင်းလောင်း တစ်လုံးကို သွန်းလုပ်တဲ့အခါ မို ( mould ) ထဲကို ကြေးရည်တွေ လောင်းထည့်တဲ့အချိန် သတ်မှတ်ချိန် အတွင်း အလျင်မီအောင် လောင်းထည့်ရပါတယ်။ ပထမလောင်းထည့်လိုက်တဲ့ ကြေးရည်တွေ အေးပြီး မခဲမီ၊ နောက်ကြေးရည်တွေကို အချိန်ကိုက် လောင်းထည့်ရပါတယ်။ ရှေ့ ကြေးရည်တွေ အေးပြီး ခဲ သွားခဲ့ရင် နောက်လောင်းထည့်တဲ့ ကြေးရည်နဲ့ အတွင်းထဲမှာ မဆက်တော့ပါဘူး။ အဲဒီလို မဆက်တော့တဲ့အခါ အတွင်းမှာအက်ကြောင်းဖြစ်ပြီး ခေါင်းလောင်းက အသံမမြည်တော့ ပါဘူး။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ခေါင်းလောင်းသွန်းပြီး သွားတဲ့အခါမှာ စိတ်ချရတဲ့ အချိန်တစ်ခုရောက်မှ မိုလုပ်စဉ် မံထားတဲ့ ရွှံတွေကို ခွာရပါတယ်။ အညီအမျှ မအေးမီ ခွာလိုက်ရင် ခွာလိုက်တဲ့ နေရာက အေးပြီး အပူ အအေးမျှပဲ အက်သွားပါတယ်။ အဲဒီအခါ ခေါင်းလောင်း အသံမမြည်တော့ပါဘူး။ "
အဲဒီလို ခေါင်းလောင်းသွန်းတဲ့ အထာမှ မသိပဲ ရုရှားက ဇာကိုလိုကိုး (Tsar Kolokol) ခေါင်းလောင်းကြီးဟာ တစ်ချိန်က အရှင်းလင်း အကြည်မြဆုံးသော သံစဉ်ထွက် ခေါင်းလောင်းကြီးဖြစ်ခဲ့သည် လို့ မှားယွင်းရေးနေ ပြောနေကြတာတွေ တွေ့ရတယ်။ wiki က ခေါင်းလောင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ခေါင်းစဉ် အချို့အောက်မှာ ရောပေါ့။
အကျဉ်းဆုံး ချုံးပြောရရင် ဇာကိုလိုကိုး ခေါင်းလောင်းကြီးကို Ivanovsky Square မှာ မြေကျင်းအကြီးကြီး တူးပြီး 1734 မှာ ခေါင်းလောင်း စသွန်းတယ်။
1735 သြဂုတ်လမှာ ခဏရပ်နားပြီး နောက်သုံးလ အကြာ နိုဝင်ဘာမှာ ထပ်သွန်းတယ်။
အလှအပ အချယ်အလှယ်လုပ်နေလို့ မပြီးသေးခင် 1737 မှာ သစ်သားထောက်တိုင်ကြီးတွေအထိ မီးလောင်တယ်။
ရေတွေနဲ့ ဝိုင်းပက်လို့ အပူအအေး မမျှတပဲ အခုမြင်နေရတဲ့ ၁၁တန်ကျော်လေးတဲ့ အပဲ့ကြီး ပဲ့ထွက်သွားတယ်။
နောင် နှစ်တရာကျော် 1836 ကျမှ တွင်းထဲက ထုတ်နိုင်ပြီး အောက်ခံခုံပေါ် တင်နိုင်တယ်။
(မိုက ရွှံ့လေး ခွာလိုက်ရင်တောင် ခွာတဲ့နေရာက အေးပြီး အက်၊ အသံမထွက်နိုင်တာ အကြိမ်ကြိမ် သွန်းရတဲ့ ဒီဟာကြီး ဘယ်တုန်းကမှ အသံမထွက်တာ ထင်ရှားပြီ။)
တကယ်မရှိတဲ့ ကောဠဟလ ထဲက အကြီးဆုံးဆိုတဲ့ ခေါင်းလောင်းကိုလည်း မတွေ့၊ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ အထိ ချိတ်ဆွဲနိုင်တဲ့ ခေါင်းလောင်းလောင်းတွေထဲမှာ အသံမြည်တဲ့ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီးကို မနာလိုတဲ့သူတွေက အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဇာကိုလိုကိုးကို တစ်ချိန်က အသံသာဆုံး သံစုံခေါင်းလောင်း လုပ်ပစ်ကြတာ တချို့လည်း ယုံကုန်ကြပါတယ်။
ခေါင်းလောင်းသွန်းတဲ့အချိန်မှာ အထက်ကပြောသလို တစ်စုံတစ်ရာမှားယွင်းလို့ အသံမထွက်တာကို ဇာတာခွင်မှ မပြနိုင်၊ မူလ ဘယ်အချိန်သွန်းတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိပဲ မိချောင်းနက္ခတ်မိလို့ အသံမမြည်ဘူးဆို လျှောက်ရွှီးတာလည်း ယုံကြတာပဲ။
တမ္ပဝတီဦးဝင်းမောင်ကြီးကို မမေးမီက ကြေးသွန်းရပ်ထဲက လူတွေကလွဲရင် အခြားသူတွေက ခေါင်းလောင်းဘာကြောင့် အသံမထွက်လဲဆိုတာ သိမှ မသိ တာကိုး။
အချုပ်ပြောရရင်တော့ ဇာကိုလိုကိုးဟာ ဘယ်တုန်းကမှ အသံမမြည်သလို၊ ခေါင်းလောင်း တစ်လုံး အသံမမြည်တာ မိချောင်း နက္ခတ် မိတာ၊ မိချောင်းမှာ လျှာမရှိလို့ အသံမမြည်တာ မဟုတ်ပဲ ပြောခဲ့သလို သွန်းတဲ့အလုပ် လုံးဝ မပြီးခင်မှာ အမှားတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ခဲ့လို့ အသံမမြည်တာသာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။
(စာကြွင်း။ ။ အဲ့ဒါကြောင့် မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီးသွန်းပြီးတော့ ပန်းတဉ်းဝန်က ခေါင်းလောင်းသွန်း လုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်သူ အားလုံးကို ထောင်ထဲ ပိတ်ထည့်ထားလိုက်တာ။ တစ်ယောက်ယောက်က လက်ကမြင်းပြီး ရွှံ့လေးသွားခွာရင် အက်ပြီး အသံမထွက်တော့မှာစိုးလို့။ သတ်မှတ်ချိန်ရောက်လို့ ပြန်လည်း လွှတ်ပေးရော သားမယားထံ ဘယ်သူမှ အိမ်မပြန်ပဲ ခေါင်းလောင်းကြီးရှိရာသွား တီးကြည့်ထိုးကြည့်နဲ့ ဝမ်းသာအားရ အောင်ပွဲ ခံခဲ့ကြတယ်တဲ့ ခင်ဗျာ)
ကျမ်းကိုး။ ။ တမ္ပဝတီဦးဝင်းမောင်၏ ခေါင်းလောင်းသွန်းပညာ ဟောပြောချက်၊ ဇာကိုလိုကိုး အတွက် Moscow Local Time၊ အရှင်ပဏ္ဍိတာနန္ဒရဲ့ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီး တကယ်ရှိမရှိနဲ့၊ မင်းကွန်းခေါင်းလောင်းကြီး သမိုင်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံကို Happy Angel ထံကယူလို့ ဓာတ်ပုံအတွက် သူ့ကို ကျေးဇူးတင်တယ်။
မြန်မာနိုင်လို့ မပျော်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ဦးရဲထွဋ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ တောင်းပန်ချက်
15:27 အတုယူစရာ, အားကစား ဘောလုံး No comments
ဦးရဲထွဋ်က သူ့ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ အခုလို နောက်ဆက်တွဲ ပြောဆိုရှင်းလင်းချက်တွေ ရေးထားပါတယ်။
ကျွန်တော့်ပို့စ်အောက်မှာ Jules Win နဲ့အချို့သူတွေက တောင်းပန်ရင် ရပြီ၊ ၀န်ထမ်းများရဲ့ အားနည်းချက် ကို ထောက်မပြသင့်ဘူး။ အဲဒီလို ထောက်ပြခြင်းအားဖြင့် ကျန်တဲ့ ဝေဖန်သူများကို အားပေးသလိုဖြစ်လိမ့် မယ်လို့ ရေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအယူအဆကို ကျွန်တော်လက်မခံပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာကထဲက ကိုယ့်ဌာနတွင်းကိစ္စများ၊ အထူးသဖြင့် မှားယွင်းမှုများကို အချင်းချင်း ဖုံးဖိထားကြ၊ အရေးယူရရင်တောင် ကြိတ်ပြီးလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အတွက် တစ်ခါတစ်လေ ပြည်သူ မပြောနဲ့၊ ဌာနအကြီးအကဲတောင်မသိလိုက်တာ ရှိပါတယ်။
အဲဒီလို လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် နုိုင်ငံဝန်ထမ်းများဟာ တာဝန်ခံမှုရဲ့ သဘောတရား ကို နားမလည်တော့ပါဘူး။ မိမိ ချို့ယွင်းအားနည်းချက်များအတွက် တောင်းပန်ဖို့ နေသာ သာ ဌာနကို လာရောက် ဆက်သွယ်လုပ်ကိုင် တဲ့ ပြည်သူကို မဖြစ်မနေ ပေးရမယ့်ဝန်ဆောင်မှုကိုတောင် ငါပေးမှ ဒင်းတို့ ရမှာ ဆိုတဲ့ စိတ်ဝင်လာ ပါတယ်။
ဒါဟာ အောက်ဆုံး ညစောင့်ဝန်ထမ်းကနေ ဌာနကြီးတစ်ခုလုံးကို တာဝန်ခံရတဲ့ ထိပ်ဆုံးအဆင့်ထိ ၀န်ထမ်း အများစုရဲ့ မသိစိတ်မှာ စွဲဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နုိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု မှာ ပြည်သူဗဟိုပြုမူဝါဒ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု
လျှော့ရေးဆိုတာ အဲဒီအခြေအနေကို ပြောင်းလဲ ဖို့ ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အားလုံးဟာ ပွင့်လင်း မြင်သာ မှုနဲ့ ဝေဖန်ရေး၊ မိမိကိုယ်မိမိဝေဖန်ရေးကို မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ရ ပါလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ အခုလို အမှားဝန်ခံတဲ့စာကို ၀န်ကြီးက ရေးရမှာ မဟုတ်ပါ ဘူး။ သက်ဆုိုင်ရာဌာနက သူဝန်ဆောင်မှုပေးရတဲ့ ပြည်သူကို တောင်းပန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ထံက ဆင်ခြေတွေပဲ ကြားနေရလို့ ကျွန်တော် ကိုယ်တုိုင် ၀င်တောင်းပန်ခဲ့ရတာပါ။
From: Ye Htut
15:17 သူ့အတွေး သူ့အမြင် No comments
လက်ရှိ အချိန်ကာလမှာ ….
အဓိက အတိုက်အခံပါတီကြီးအပေါ် …
လူအတော်များများ ဖြစ်နေကြတဲ့….
အားမလို အားမရ ဖြစ်နေကြတဲ့…
ပြီးခဲ့တဲ့ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး အနှစ်၂၀ ကာလမှာ …
အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီကြီးဟာ …
လူထု ထောက်ခံမှုကို …
တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ရရှိခဲ့ဖူးပါတယ် ….
လူ ရဲ့မွေးရာပါ အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့….
လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် …
အသင်းအဖွဲ့ များ ဖွဲ့ စည်းခွင့် ….
မိမိ ဆန္ဒကို ဖော်ပြခွင့် ….
စတဲ့အခွင့်အရေးများကို …
တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တားမြစ်ထားခဲ့တဲ့….
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်အောက်မှာ …
ဒီ စနစ်ကို အဓိကဆန့် ကျင်နေတဲ့ပါတီကြီးကို ….
ပြည်သူအားလုံး ၀ိုင်းဝန်းထောက်ခံခဲ့ကြတာဟာလဲ …
အထူးအဆန်းလို့ တော့ မဆိုနိူင်ပါဘူး ….
အဲဒီ အချိန် အဲဒီခေတ်ကာလမှာ ….
အန်အယ်လ်ဒီ ပါတီရဲ့….
တိုင်းပြည်ကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင် ….
စီမံလုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့Plan တွေကိုလဲ ….
အချိန်မကျသေးတဲ့ အတွက် ….
ကျွန်တော်တို့ဘာမှ …
မေးခွန်းထုတ်စရာအကြောင်း မရှိခဲ့ပါဘူး …
အတော်ကို လျှင်လျှင်မြန်မြန် ….
စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ရပ်စဲသွားပါတယ် …
ရွေးကောက်ပွဲ တစ်ခုလုပ်ပြီး …
အရပ်သားအစိုးရ တက်လာပါတယ် …
နိူင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ ...
အားလုံး လွှတ်လိုက်ပါတယ် ….
ဆင်ဆာစနစ်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ် …
စာအုပ်တစ်အုပ် ထုတ်ဖို့…
စာရေးဆရာ ၊ ပုံနှိပ်တိုက်နဲ့….
ပိုက်ဆံပဲ လိုတဲ့အခြေအနေအထိ …
ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားပါတယ် ….
ကမ္ဘာ့ နိူင်ငံအသီးသီးက ….
ခေါင်းဆောင်တွေ သံတမန်တွေ …
အပြေးအလွှား ရောက်ရှိလာပါတယ် …
အကြွေးတွေ လျှော်ပြစ် …
အကူအညီတွေ စရောက်လာပါတယ် ….
ကားဈေး ၊ ဖုန်းဈေးတွေ ဝေါကနဲ …
နိူင်ငံခြားငွေ နဲ့ရွှေဈေး တည်ငြိမ်လာတယ် …
ဆီဆိုင်တွေ ပုဂ္ဂလိက ကို ပြောင်းသွားတယ် …
Private ကျောင်းတွေ ပေါ်လာတယ် ….
ပြည်သူ နဲ့ဝန်ကြီးဌာန ဖြစ်တဲ့ အမှုမှာ…
၀န်ကြီးဌာန ဘက်က ရှုံးနိမ့်သွားတယ် …
ငြိမ်းချမ်းရေး ဟာ ….
အနီးကပ်ဆုံး အနေအထားကို ရောက်ရှိလာပါတယ် ….
ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာတော့ ….
ခရိုနီတွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းတွေဟာ …
အရင်လို ထင်သလို လုပ်လို့ မရတော့ပါဘူး ….
အရင် သူတစ်လူ ငါတစ်မင်း ခေတ်ကနေ ….
ပြည်သူကို လူသိရှင်ကြား ….
ပြန်တောင်းပန်ရတဲ့အနေအထားမျိုးအထိ …
ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော ….
ကျွန်တော်တို့ ဟာ …
စိတ်လုံခြုံမှု တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို …
စတင် ခံစားလာကြ ရပါတယ် …
အသွင်ပြောင်း အစိုးရဟာ …
သန့် သန့် ရှင်းရှင်း ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး….
အတိုက်အခံပါတီကြီး အနေနဲ့ လဲ …
လွှတ်တော်ထဲကို အင်အားတစ်ချို့…
စတင်ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ …..
ကောင်းပါပြီ ….ဒါဟာ …
ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့….
အချိန်ကာလ ပါပဲ ….
အတိုက်အခံပါတီကြီး အနေနဲ့…
တိုင်းပြည် အတွက် ဘာများစပြီး….
လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်တော့မှာပါလဲ …..
ပြသနာက စလာပါတယ် …
ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုက်အခံဆိုတာ …
အာဏာရ အစိုးရကို ….
Check & Balance လုပ်မယ့် ...
အတိုက်အခံ ပါ ….
အမြဲတန်း လိုက် ကန့် လန့် တိုက်နေတဲ့…
အတိုက်အခံ မဟုတ်ပါဘူး ….
မြန်မာပြည် အနှံ့ အပြားက ….
အစိုးရ ၀န်ထမ်းတစ်ချို့…
ခရိုနီ တစ်ချို့ ရဲ့ မသမာခြစားမှု …
နိူင်လိုမင်းထက်လုပ်မှုတွေ ကို …
ဒေသခံ အတိုက်အခံ ပါတီဝင်တွေက တင်ပြ …
ပါတီဌာနချုပ်က အဖွဲ့ နဲ့ လာကြည့် …
အစိုးရကို စာရေး ၊ လွှတ်တော်မှာ တင်ပြ …..
အစိုးရ အနေနဲ့ဘယ်လိုမှ …
အရေးမယူပဲ နေလို့ မရပါဘူး ….
ဒီ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုနဲ့ တင် …
မသမာသူတွေ ရဲ့ကိုယ်ကျိုးရှာမှုတွေ …
အတိုက်အခံပါတီကြီး အနေနဲ့….
အဆိုဘယ်နှစ်ခု တင်သွင်းခဲ့ပါသလဲ ….???
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကော်မတီ ဟာ …
တရားရုံးတွေ အကျဉ်းထောင်တွေ ....
အချုပ်ခန်း ရဲစခန်းတွေကို …
လိုက်လံ စစ်ဆေးခွင့်ရှိပါတယ် ….
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ….
တစ်လ တစ်ခါ နှစ်ခါလောက်လေးပဲ လာစစ်ပါအုန်း …
ဗရုတ်သုတ်ခ လုပ်မထားရဲပါဘူး …
လက်ရှိထက်တော့ ပိုအဆင်ပြေသွားမှာ အမှန်ပါ ….
ဘယ်နှစ်ခါများ သွားစစ်ဆေးပြီးပါပြီလဲ … ????
မြေသိမ်းခံ တောင်သူတွေရဲ့ ကိစ္စတွေ …
သွားလေ့လာကြည့်လို့ ရပါတယ် ….
မြေရာဇ၀င်တွေ စစ်လို့ ရပါတယ် …
ဒေသအာဏာပိုင် တောင်သူ ….
မျှမျှတတ နားထောင်ကြည့်လို့ ရပါတယ် …
ပြီးရင် ဘက်မလိုက်ဘဲ ….
ကြေငြာချက် အကြံပြုချက်တွေ ….
ရဲရဲဝံ့ ဝံ့ ထုတ်ပြန်လို့ ရပါတယ် …
ဘယ်နှစ်ခါများ သွားရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီလဲ …????
စစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသတွေ …
ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်နယ်တွေ …
သွားရောက်လေ့လာ အကဲဖြတ် …
ပကတိအခြေအနေကို သုံးသပ်ပြီး ….
ပြသနာတွေ ငြိမ်းအေးသွားဖို့….
နှစ်ဘက် မျှမျှတတ အကြံပြုလို့ ရပါတယ် ….
ဘယ်နှစ်ခါများ အကြံပြုဖူးပါသလဲ …. ???
နိူင်ငံရေး မျိုးဆက်ပြတ်နေကြောင်း ...
၂၀၁၅ မှာ အခြေခံဥပဒေအရ ...
ဒေါ်စု သမ္မတ မဖြစ်နိူင်ခဲ့ရင် ...
နောက်မျိုးဆက်ကို ထိုးတင်ပေးဖို့ လိုကြောင်း ...
ပါတီဖွဲ့ စည်းပုံကို စနစ်တကျ ....
ပြန်လည်ဖွဲ့ စည်း တည်ဆောက်သင့်ကြောင်း ...
လက်တွေ့ ကျတဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြချက်တွေ ...
အများကြီး ရှိနေပါတယ် ....
လေးလေးစားစားနားထောင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးပါပြီလဲ ....????
တကယ့်လက်တွေ့ မှာတော့ ….
ဒါတွေ တစ်ခုမှ ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး ….
လူထု ဟောပြောပွဲတွေ …
၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး Campaign တွေ နဲ့ ပဲ ….
စိတ်ပျက်စရာ တစ်ချိန်လုံး အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တာပါ ….
ကိုယ့်ပါတီဖွဲ့ စည်းပုံမှာတောင်မှ .....
ပါတီ ဒုဥက္ကဌ နဲ့အတွင်းရေးမှူးကို ...
အခုထိ ခန့် အပ်နိူင်စွမ်း မရှိသေးပါဘူး ....
ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုး တင်ဖူးတဲ့…
ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ တင်ပြပေးပါဆိုတဲ့အဆိုလောက်ကလွှဲရင် …
အတိုက်အခံပါတီက တင်သွင်းတဲ့အဆိုတွေဟာ …..
လွှတ်တော်တွင်း ခေါင်းပေါင်းချွတ်ခွင့်တို့ …
ဟိုနေ့ ကို ဟိုနာမည် …
ဒီနေ့ ကို ဒီနာမည် ပြောင်းပေးဖို့အစီအစဉ် ရှိ မရှိ တို့ ….
စတဲ့ပေါကြောင်ကြောင် အဆိုတွေ …
အများအပြား ပါနေတာကလဲ ….
အတော် နားမလည်နိူင်စရာပါ ….
ပါတီ ရဲ့ စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းတွေ …
၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးတွေ မလုပ်နဲ့မပြောလိုပါ ….
အတိုက်အခံပါတီရဲ့အဓိက တာဝန်တွေကို …
ကျွန်တော် အရမ်းမခံချိ မခံသာ ….
နားမလည်နိူင်အောင် ဖြစ်ရတဲ့…
မေးခွန်းတစ်ခု မေးလိုပါတယ် …
ခင်ဗျားတို့အဓိက အတိုက်အခံပါတီကြီးကမှ …
အစိုးရကို ထိထိရောက်ရောက် …
Check & Balance မလုပ်ရင် …
ဘယ်သူကများ လာလုပ်မှာပါလဲ ……
တစ်ရက်နှစ်ကြိမ်လောက် ထုတ်ပြန်နေတဲ့…
တိုင်းပြည်ကို ထိထိရောက်ရောက် …
အကျိုးပြုနိူင်တဲ့ ကြေငြာချက်မျိုး ….
ဘယ်နှစ်ခု ပါဝင် ခဲ့ဖူးပါသလဲ … ????
အခု လက်ရှိ အနေအထားမှာတော့ …
အဓိက အတိုက်အခံ ပါတီကြီးရဲ့ မူဝါဒကို ….
သုံးသပ် တွက်ဆရရင် …
အခု ငါတို့ တိုင်းပြည်အတွက် ထလုပ်ရင် …
ကြားက အစိုးရက ၀င်ပြီး အသားယူလိမ့်မယ် …
အဲတော့ ... စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ မှု အပါအ၀င် ….
ကျန်တဲ့ ပြသနာတွေ ဘာမှမပါနဲ့အသာပြစ်ထားလိုက် ….
ငါတို့ ပါတီ အာဏာရရေး ကိုသာ …
အာရုံစိုက်လုပ်ဆိုတဲ့….
ခပ်ပဲ့ ပဲ့မူဝါဒမျိုး ဖြစ်နေတယ်လို့ ပဲ မြင်ပါတယ် …
( မဟုတ်ဘူး ဆိုလဲ ဆောရီးပါ … )
ထပ်ပြီး စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာ တစ်ခုက…
အတိုက်အခံပါတီ ထောက်ခံသူတစ်ချို့ ရဲ့…
သူတို့ ပါတီကို ဝေဖန်ရင် …
ကြံဖွတ်လူ အစိုးရလူ ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့…
ကျွန်တော်တို့ က အတိုက်အခံပါတီကို….
လက်ရှိ အာဏာရပါတီကို ....
ထောက်ခံနေတယ်လို့အဓိပ္ပာယ် မရပါဘူး….
အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒဟာ ….
တိုင်းပြည်တိုးတက်စေချင်တဲ့ဆန္ဒပါ …..
အရင် အစိုးရ လက်ထက်က မသမာမှုတွေကို …
တလစပ် လက်ညိုးထိုးပြီး ….
ဒေါ်စုသာ ကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့အယူအဆကို …
တွင်တွင် ၀ါဒဖြန့် နေတာဟာ …
ဒေါ်စု အပေါ် ချစ်ရာရောက်သလား …
နှစ်ရာ ရောက်သလား …
သေချာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ ……
လူနည်းစုကို ညှာတာပါဆိုတဲ့...
အတိုက်အခံပါတီရဲ့မူဝါဒကို …
ကျွန်တော်တို့ ဝေဖန်တော့ ….
အာ့ဆို ပြည်ခိုင်ဖြိုး ၀ှိုက်ကဒ် ကိစ္စ …
ဘယ်လို လုပ်မလဲ လို့….
အမှားကို အမှားနဲ့ပြန်ချေတာမျိုးဟာ …
သဘာဝ မကျပါ ….
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ….
၀ှိုက်ကဒ်တွေကို မဲပေးခွင့်ပြုခဲ့တာ ….
အာဏာရပါတီ ရဲ့အရှက်သိက္ခာ ….
ဗျန်းဗျန်းကွဲ ခဲ့ရတဲ့လုပ်ရပ်ပါ ….
ဒါဆို အခု အန်အယ်လ်ဒီပါတီက ….
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ …
၀ှိုက်ကဒ်တွေ မဲပေးခွင့် မပြုဖို့…
ဘာလို့မတောင်းဆိုတာပါလဲ ….????
သောက်တလွဲ လုပ်ထားခဲ့ရင် …
အတိုက်အခံပါတီက ၀င်ပြီးထောက်ပြ ရတာ …
အတိုက်အခံပါတီရဲ့ အလုပ်ပဲ မဟုတ်ပါလား ….???
၀ှိုက်ကဒ် ကိစ္စကို ….
လမ်းထိပ်က မုန့် ဟင်းခါးသည်က ….
ထပြီးကြေငြာချက်ထုတ်လို့ မရပါ ….
ရပ်ကွက်ထဲက ဆိုက်ကားသမားက ….
ထပြီး ထောက်ပြလို့ မရပါ ….
အတိုက်အခံ ပါတီက ...
လုပ်ကို လုပ်ရမယ့် အလုပ်ပါ ….
လက်ရှိ အစိုးရမှာ …
လိုအပ်ချက် လစ်ဟာချက်တွေ ရှိနေတာ ….
ဘာမှ အငြင်းပွားစရာ မရှိပါ …
တကယ် လိုအပ်နေတာဟာ …
အတိုက်အခံ ပါတီအနေနဲ့…
အဲဒီလိုအပ်ချက် လစ်ဟာချက်တွေကို …
တိုင်းပြည် အကျိုးအတွက် …
အကြောင်းအကျိုးနဲ့ထောက်ပြပေးဖို့ ပါ …
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအများစုကတော့ …
တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ကိစ္စတွေကို …
ငြီးငွေ့ စိတ်ပျက်လို့နေပါပြီ ….
ဘယ်သူ့ ဘယ်သူ မှလဲ ...
အနိူင်ရမယ် မဟုတ်ပါ ….
ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့လူထုအားနဲ့…
သဘောထား တင်းတင်းမာမာ ….
အလုံးစုံ အာဏာရရေးကို ဦးတည်လာတဲ့ အခါမှာ …
သူ့ မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်အမတ်အားနဲ့…
PR ကို အတည်ပြုပြီး …
အလုံးစုံ အာဏာ မရရေးကို ပြန်ဆော်လိုက်လို့…
အီစလံဝေ ဂွမ်းသွားတဲ့ကိစ္စဟာ …
အတိုက်အခံ ပါတီ ရဲ့….
မဟာဗျူဟာ နည်းဗျူဟာတွေ လွဲမှားနေကြောင်း …
အကောင်းဆုံး သက်သေပါ ….
ဟိုပါတီကြီး တက်လာရင် ....
အလုံးစုံ ပြောင်းသွားမယ် ...
ဒီပါတီကြီး တက်လာရင် ...
ဟပ်ချလောင်း အော်ပြီး ....
ကောင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ အပြောမျိုးကို ...
လုံးဝ အယုံအကြည် မရှိတော့ပါ ...
တိုင်းပြည်ရဲ့ များပြားလှတဲ့အခက်အခဲတွေကို ....
ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားဖို့ဆိုတာသည် ...
အာဏာရ လာမယ့် ပါတီ တစ်ခုလုံး ရဲ့....
မူဝါဒ ၊ အရည်အချင်း ၊ စေတနာ ....
အားထုတ်မှု စတဲ့အချက်တွေပေါ် ....
အများကြီး မူတည်နေတာပါ ....
ပြည်သူအများစု အနေနဲ့ကတော့ ...
တိုင်းပြည်အတွက် အမြဲ အပတ်တကုပ် ...
ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့...
အာဏာရပါတီ တစ်ခု နဲ့....
( အစိုးရ လုပ်သမျှကို ....
ကန့် လန့် လိုက်တိုက်နေတဲ့....
အတိုက်အခံ မဟုတ်သော ... )
Check & Balance လုပ်ပေးတဲ့…
အတိုက်အခံပါတီတွေ ကိုသာ ….
အလိုရှိတယ်လို့....
ဆိုလိုချင်တာ ဖြစ်ပါကြောင်း …. ။ ။
15:15 သူ့အတွေး သူ့အမြင်4comments
တပ်က အာဏာရယူလိုက်ပြီးတဲ့ နောက် ….
အဓိက ပြုပြင်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့….
ကိစ္စကြီးတွေ အများကြီး ရှိတယ် ….
အဲဒီ အထဲကမှ …
အပစ်အခတ် ရပ်စဲခဲ့တဲ့ကိစ္စ …
တပ်မတော်ကို ခေတ်မီတပ်မတော် အဖြစ်…
အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စ နဲ့….
တပ်တွေနေရာချထားခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေက …
အတော် အရေးကြီးတယ် …
၄၈ ခုနှစ်ကတည်းက စခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဟာ …
တစ်ချိန်လုံး ဘယ်လိုမှ အဆုံးမသတ်နိူင်ခဲ့ဘူး…
ဘယ်လိုမှ ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး ….
ဘာလို့ လဲဆိုတော့ …
ဗကပ အုပ်စုတွေကို …
တရုတ်က ထောက်ခံအားပေးနေပြီး …
တိုင်းရင်းသား အုပ်စုတွေကို …
ယိုးဒယားက ထောက်ခံအားပေးနေခဲ့လို့ ပဲ ….
၁၉၉၀ မှာ ဗကပ ပြိုကွဲသွားပြီး နောက် ….
အပစ်အခတ်တွေ စ ရပ်စဲတော့ …
စစ်အစိုးရ နဲ့…
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ တွေနဲ့….
တွေ့ ဆုံတဲ့ နေရာမှာ …
အဓိက ပြောခဲ့တဲ့စကား ၃ချက်ရှိတယ် …
၁။ ကိုယ့်ဒေသကို ကိုယ် ဖွံ့ ဖြိုးအောင်လုပ် …
၂။ မူးယစ်ဆေးဝါး မလုပ်နဲ့….
၃။ နောက်တက်လာတဲ့....
အရပ်သားအစိုးရ လက်ထက်မှာ …
နိူင်ငံရေး အရ ဆက်ဆွေး ….
ငါတို့ က အာဏာသိမ်း စစ်အစိုးရဖြစ်နေတော့ …
နိူင်ငံရေး လိုလားချက်တွေ ဆွေးနွေးလို့ မရဘူး ….
ဆိုတဲ့အချက် တွေပဲ ….
အပစ်အခတ်ရပ်စဲ လိုက်တော့ …
ရှမ်းပြည် မှာတော့ ....
သိသိသာသာ ငြိမ်းချမ်းသွားတယ် …
ကျန်ခဲ့တာက ကေအန်ယူ နဲ့ခွန်ဆာ ….
၉၁ ၉၂ ၉၃ ၉၄ ခုနှစ် ၀န်းကျင်တွေမှာ …
တပ်မတော်က ခြေမြန်တပ်မတွေက …
ကေအန်ယူ အခိုင်အမာစခန်းတွေကို …
ထိုးစစ်တွေ စလုပ်တယ် …
မော်ဖိုးကေ မဲလ ...
၀ါးခသစ် ၀ါးခဟောင်း မာနယ်ပလော ….
အာ့စခန်းတွေ အကုန်ကျသွားတယ် …
နောက်ထပ် အခိုင်အမာစခန်းကြီးတွေ …
ဒါပေမယ့် နယ်မြေကတော့ မငြိမ်းချမ်းဆဲပဲ ….
ခွန်ဆာ နဲ့ဝနဲ့က ...
စပြီး စစ်ဖြစ်ကြတယ် …
နယ်မြေလုတာရယ် စီးပွားရေးပြသနာရယ် …
ခွန်ဆာက သူ့ ကိုယ့်သူ ရှမ်းပြည်သမ္မတလို့…
ထ လုပ်တာရယ် …
အကြောင်းတွေက အစုံပဲ ….
၁၉၉၅ လောက် အရောက်မှာ …
၀တွေရော ခွန်ဆာရော နှစ်ဖက်လုံး …
လူထောင်ကျော် သေကုန်ပြီ ….
၀က ပိုအထိနာတော့ အစိုးရဆီက …
အကူအညီ တောင်းရတယ် …
ခွန်ဆာအဖွဲ့ က အာ့တုန်းက …
အင်အားသုံးသောင်းလောက် ရှိတယ် ….
လေယာဉ်ပစ် SAM ဒုံးပျံတွေပါ ပိုင်တယ် …
ဌာနချုပ်က ဟိုမိန်းမှာ …
ဘုရင်လို နေတာ …
ပြည်ပ သတင်းထောက်တွေ …
အဖွဲ့ အစည်းတွေ …
တစ်ချိန်လုံး ၀င်ထွက် ….
ပွဲတွေ အခမ်းအနားတွေ ...
ခွန်ဆာ ကို ထိန်းချုပ်ဖို့ က လိုနေတော့ …
အစိုးရကလဲ ၀တွေကို အကူအညီပေးတယ် …
၁၉၉၆ ၀န်းကျင်လောက်မှာ …
အဖွဲ့ တွင်းပြသနာတွေ ခွဲထွက်မှုတွေ …
စစ်ရေး အထိနာလာမှုတွေကြောင့် …
ခွန်ဆာအဖွဲ့ က လက်နက်ချလိုက်တယ် ….
အာ့မှာ ရှမ်းပြည်ဟာ ….
သေနတ်သံ တိတ်သလောက် ဖြစ်သွားတယ် ….
စစ်အစိုးရ ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေ …
အများကြီးတွေ့ လာရတယ် ….
ကိုယ်တွေက အာ့အချိန် ဗိုလ်လောင်း ဖြစ်နေပြီ …
အာ့ကတည်းက Machanised army ဆိုတဲ့စကားကို …
ကျောင်းမှာ တွင်တွင် ကြားနေရပြီ ….
အားလုံးကို မျက်လုံးပြူးစေတာက ….
တပ်သစ်တွေ အများကြီး ဖွင့်တဲ့ကိစ္စပဲ ….
တပ်သစ်ကို ဘယ်စစ်သားမှ မသွားချင်ဘူး …
နေရထိုင်ရတာ အဆင်မပြေ …
အဆောက်အဦးမရှိ ယာယီတဲတွေနဲ့….
မီးမရှိ ရေက အဝေးကြီး သွားခပ်ရတယ် …
အဆိုးဆုံးက အာ့တပ်တွေက …
ကိုယ်နဲ့ အသေအကြေ ချခဲ့တဲ့ သူတွေကြားမှာ …
အရင် ရှေ့ တန်း တစ်ဂျိန်းဂျိန်း ပစ်ခတ်နေတဲ့ ….
နေရာတွေမှာ သွားဖွင့်တာ …
ခလရ ၁၂၅ ကုန်းကြမ်းက တပ်ဆိုရင် …
ကိုယ် ကျောင်းဆင်းလို့တပ်ရောက်တဲ့ အထိကို …
တစ်ခုခု အဆင်မပြေဖြစ်ရင် ….
အာ့နားက ကိုးကန့် ရွာတွေက …
တပ်ကို လာလာဝိုင်းတုန်း …
ရွာဆိုလို့ပေါ့သေးသေး မမှတ်နဲ့…
လက်နက်အပြည့်အစုံ ရှိတယ် …
ဗကပ ဟောင်းတွေ အများကြီး …
တစ်ချို့ အဖိုးကြီးတွေက …
ကွမ်းလုံတိုက်ပွဲတုန်းက ပါဖူးတယ်တဲ့….
အာ့တော့ ဘယ်သူမှ တပ်သစ်ကို မသွားချင်ကြဘူး…..
ဒါပေမယ့် ဘယ်လွတ်မလဲ …
တပ်သစ်က နည်းနည်းနောနော ဖွင့်တာ မဟုတ် …
တစ်ပြည်လုံးမှာ တပ်ရင်းတွေ ရာနဲ့ ချီ ဖွင့်တာ…
အခု အခြေကျနေပြီဖြစ်တဲ့…
စကခ ဒကစတွေက အာ့တုန်းက စခဲ့ကြတာ …
တပ်မ ၂၀ ၃၀ လောက် ….
တပ်ရင်း ၃၀၀ ၄၀၀ လောက် ….
ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဖွင့်လာတော့ …
တပ်မတော် တစ်ခုလုံး အကြီးအကျယ် ….
အပြောင်းအရွေ့ တွေ လုပ်ရတယ် …
တစ်တပ် လူ၁၀ယောက် လာထား …
လူဟောင်း ၁၀၀ …
အခုမှ ကျောင်းဆင်းလာတဲ့လူသစ် ၁၀၀ …
လာခဲ့ တပ်ရင်းမှူး …
တပ်ရင်းမှူးကလည်း ဗိုလ်မှူး …
အခုမှ ယာယီတပ်ရင်းမှူး အမိန့် ထွက်တာ ….
လစ်တော့ အာ့မှာ တပ်မြေပုံ …
မင်း သွားပြီး မြေညှိထားနှင့် ….
အာ့ ကာလတွေက ကျောင်းဆင်းပွဲတွေမှာ …
ကျောင်းဆင်း အရာရှိတွေ အမြဲရွာလည်ရတာက …
ကိုယ့်တပ်က ဘယ်နားရှိမှန်း မသိတဲ့ပြသနာ …
တပ်နံပါတ်တွေကလဲ အသစ်တွေ ….
ကျောင်းက အရာရှိတွေလဲ မသိကြတော့ဘူး …
ဒီလိုပဲ မေးလိုက် မြန်းလိုက်နဲ့…
စုံစမ်းပြီး သတင်းသွားပို့ ရတယ် …
တပ်တွေက လူကမပြည့် …
အဆောက်အဦးက မရှိ နဲ့…
တစ်ယောက်တည်း နှစ်ယောက်တည်း …
အမှတ်တမဲ့ သွားမိရင် …
အာ့လို နေရာမျိုးတွေ ….
ည ၆နာရီနောက်ပိုင်း ဆိုရင်တော့ …
အရာရှိရိပ်သာ နား လုံးဝမသွားနဲ့….
( အမှန်က အရာရှိတဲလေး ကတ္တရာလိပ်လေးမိုးထားတာ )
ရိပ်သာ မရောက်ခင် …
ခြေလှမ်း ၃၀လောက်ကတည်းက ….
စစ်ရုံးက ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ….
နည်းမျိုးစုံ အော်ဆဲနေတဲ့ အသံတွေကို …
နားမဆံ့ အောင် ကြားရမယ် …
ဒါပေမယ့် ၂၀၁၀ မတိုင်ခင် …
အာ့တပ်တွေက အတော်အထိုင်ကျကုန်ပြီ …
အခိုင်အမာ အဆောက်အဦးတွေ ဖြစ်နေပြီ …
တပ်တွင်းလမ်းတောင် ကတ္တရာလမ်းတွေ ဘာတွေနဲ့ …
၂၀၁၀ ၀န်းကျင် လောက်ရောက်မှ …
လက်ရှိ တပ်မတော်က တပ်ရင်းတွေရဲ့ တပ်တည်တွေနဲ့…
၁၉၈၈ ၀န်းကျင်က တပ်တည်တွေ …
တစ်ချို့ အရာတွေကို နက်နက်နဲနဲ နားလည်လာမိတယ်…
မနှစ်က မပခ က ညီလေးတစ်ယောက်နဲ့ အတွေ့ …
အချိန် အတော်ကြာကြာ …
စကားလက်ဆုံ ကျ နေကြတယ် ….
တစ်ပုံတစ်ခေါင်း ကျန်ခဲ့ရတယ် ….
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၂၇ ၇က်နေ့ မှာ ….
ပန်ဝါမှာရှိတဲ့…
နယ်ခြားစောင့်တပ်ရင်း (၁၀၀၂ ) ကို …
ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ ၁၀၁ က …
တပ်မဟာမှူးကိုယ်တိုင် ဦးစီးပြီး ၀င်တိုက်တယ် …
ကြိုတင်စီစဉ်ပြီး တိုက်တာ …
၀င်လမ်း ထွက်လမ်း ….
စစ်ကူလိုက်လာမယ့် တပ်တွေကို …
ခြုံခို မယ့် အဖွဲ့ တွေ အားလုံးအသင့်နေရာယူပြီးမှ …
လက်နက်ကြီးတွေ ဗုံးဗောလအော ပစ်ပြီး …
စစ်ကူကတော့ ဘယ်လိုမှ လာနိူင်စရာ မရှိ…
နယ်ခြားစောင့်တပ်က လဲ …
အသေခံကို ချတယ် …
မိန်းမတွေပါ သေနတ်တွေကိုင်ပြီး ၀င်ဆော်တယ် …
ဒါပေမယ့် အင်အားက အရမ်းကွာနေတော့ …
တပ် ရဲ့သုံးပုံ နှစ်ပုံလောက်ကို …
ရန်သူက ၀င်စီးမိနေပြီ …..
နောက်ဆုံး တပ်ဗဟိုကင်း တစ်ခုပဲ ကျန်တော့တယ် …
အဲ ဗဟိုကင်းလဲ ဇကာပေါက်ဖြစ်နေပြီ …
ဒါပေမယ့် တပ်မှာတော့ ….
ဒါဟာ ဘာမှ မထူးဆန်းဘူး …
စခန်းကို ၀ိုင်းချတယ် …
စစ်ကူအဖွဲ့ တွေကို ဖြတ်တောက်ထားတယ် ….
စိမ်ပြေနပြေ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးတယ် ….
နောက်တစ်ရက်လောက်မှ ရောက်မယ် ….
စခန်းကို ပြန်ဆောက်ရမယ် …
ဒါ သီအိုရီပဲ ….
တစ်သက်လုံး ဒီအတိုင်းဖြစ်ခဲ့တာ ….
ဒါပေမယ့် အခုကျတော့ ….
ထင်မထားတာတွေက ဖြစ်လာတယ် …
ခေါင်းပေါ်မှာ ရုတ်တရက် ရောက်လာတာက …
MI 35 တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်တွေ ….
ရော့ကက်တွေ တစ်ဂျိမ်းဂျိမ်း ပစ်တယ် …
ရဟတ်ယာဉ်မှာပါတဲ့….
၃၀ မီလီမီတာ စက်အမြောက် နှစ်လက်ပူး က …
အတော် ဆိုးတယ် …
ပေါင်လုံးလောက် သစ်ပင်တွေပါ ပြတ်ကျတယ် ….
ကေအိုင်အေ တပ်မဟာ ၁၀၁ …
ခဏ နောက်ပြန်ဆုတ်ရတယ် …
ရဟတ်ယာဉ် ကျည်ကုန်လို့ပြန်သွားမှ …
ဆက်သိမ်းမယ်လို့ စဉ်းစားတယ် …
ဒါပေမယ့် ဇာတ်လမ်းက မပြီးသေးဘူး …
ရဟတ်ယာဉ်တွေက ပိုပိုများလာတယ် …
ပွိုင့် ဖိုက် နဲ့စက်လတ်ပစ်သံတွေပါ ပါလာတယ် …
တပ်မတော်က တပ်ရင်းတစ်ရင်းလုံး ….
ရဟတ်ယာဉ်တွေ နဲ့လိုက်လာတာ …
လူသယ် ရဟတ်ယာဉ်တွေက …
တိုက်ပွဲ ဧရိယာနားမှာပဲ ဆင်းတယ် ….
လူတွေ ခုန်ချတယ် …
နောက်ထပ်လူတွေ သွားသယ်တယ် …
အပေါ်က တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်တွေက …
ထောင်းလမောင်း ကျေအောင် ပစ်နေတော့ …
ခေါင်းဖော်လို့ လဲ မရ ....
စစ်ကူ လူသယ်ရဟတ်ယာဉ်တွေ ….
ဘာမှ လုပ်မရဘဲ ….
နောက်ဆုံး ကေအိုင်အေ တပ်မဟာတစ်ခုလုံး …
အလဲလဲ အကွဲကွဲ နဲ့ ပြန်ဆုတ်ရတယ် …
တစ်ခါ လဂျားယန် ကိစ္စ …
လဂျားယန်မှာ ၀ိုင်းခံနေရတဲ့တပ်ကို ကယ်ထုတ်ဖို့…
စစ်ကြောင်းတွေက တိုးဝင်သွားတယ် …
ကေအိုင်အေ နဲ့အေဘီ ပူးပေါင်းအဖွဲ့ က ...
လမ်းက စောင့်ချတယ် …
အပေါ်က ရဟတ်ယာဉ်တွေ လိုက်လာတယ် ..
ပစ်ကူ ပေးပြီး လမ်းကြောင်းကို ရှင်းထုတ်တယ် …
အာ့မှာ အချက်အခြာကျတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ချို့ ကို …
တပ်တွေက တက်ရှင်းလိုက်တယ် …
အာ့အထိ ဘာမှ မထူးဆန်းသေးဘူး …
နောက်က လိုက်လာတဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေ ….
စစ်ကူတွေ ပါလာတယ် …
ရိက္ခာ ခဲယမ်းတွေ ပါလာတယ် …
တောင်ထိပ်တွေပေါ် ချပေးသွားတယ် …
နောက်တစ်ခေါက် ပါလာတာက …
ကြိုးနဲ့ ဆွဲလာတာ …..
တစ်ရက်အတွင်း အာ့တောင်ကုန်းက …
အမြောက်စခန်း ဖြစ်သွားတယ် ….
အမြောက်တကမ်း မီတဲ့ကုန်းတွေပေါ်က …
ကေအိုင်အေ စခန်းတွေ အားလုံး ဆင်းပြေးရတယ် …..
နောက်က ခြေလျင်တပ်တွေ က …
ထပ်ချပ် လိုက်သိမ်းတယ် ……
ကေအိုင်အေ စခန်းတွေ ကုန်သလောက် ဖြစ်သွားတယ် ….
တပ်မတော်က ခုနောက်ပိုင်း ...
စသုံးလာတဲ့စစ်နည်းဗျူဟာ အသစ် …
တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်တွေက ပစ်ကူပေး …
အချက်အခြာကုန်းတွေ ရတာနဲ့…
အမြောက်တွေကို ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ ဆွဲလာ …
မွမွကြေအောင် ချေပြစ်လိုက်တာ …
ပြီးရင် နောက်တစ်ကုန်း …
ဒီ စစ်နည်းဗျူဟာ ဟာ …
လေတပ်မရှိတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်တွေ အတွက် ….
တကယ့် အိပ်မက်ဆိုးပဲ ….
၀ လိုဟာမျိုး ...
သူ့ ဖာသာသူ ….
ဘယ်လောက် အင်အားတောင့်တောင့် …
ခုနက စစ်နည်းဗျူဟာနဲ့ ဆို အတော်ခက်သွားပြီ…
အနောက်ကနေ အမြောက်ဆွဲပြီးလိုက်လာတဲ့….
ရဟတ်ယာဉ်တွေကို တားဆီးဖို့ 
လေယာဉ်ပစ် ဒုံးကို သုံးမယ် ဆိုရင်လဲ …
ရှေ့ ကနေ လမ်းကြောင်းကို ရှင်းနေတဲ့…
ရှေ့ ကာတပ်တွေကို ဖောက်ဝင်နိူင်မှရမယ် …
ဒါလဲ အပြောသာ လွယ်တာ …
လက်တွေ့ တော့ ဒီလောက်မလွယ်လှဘူး ….
သေချာတာကတော့ တပ်မတော်ဟာ ….
ကြည်း လေ အမြောက် ဟန်ချက်ညီ စစ်နည်းဗျူဟာကို …
စတင် သုံးစပြုလာပြီ ….
မိတ္ထီလာမှာ လုပ်သွားတဲ့…
လေ့ကျင့်ခန်း အနော်ရထာ ဟာ …
ဒါကို အထင်အရှား သက်သေပြတယ် ….
နောက်ထပ် ထင်ရှားတာက တစ်ခုက …
တပ်မတော် ရဲ့၂၂ နှစ် စီမံကိန်းတစ်ချို့…
မှန်ကန်အောင်မြင်ခဲ့တယ် ဆိုတာပဲ …
၂၂ နှစ် ကာလမှာ …
တပ်မတော် အနေနဲ့ရုပ်ဆိုးခဲ့တာတွေလဲ ရှိတယ် …
အဓိက ရုပ်အပျက်ဆုံးက …
ဗိုလ်ချုပ်တွေ ကိုယ်ကျိုးရှာခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲ ….
ဒီနေရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်အဆင့် လယ်ဗယ် မို့ သာ …
ဗိုလ်ချုပ်လို့ တပ်လိုက်ရတယ် …
အရပ်ဖက်ရာထူး တယက ဥက္ကဌ လို့ ပြောမှ ပိုမှန်မယ် …
တိုင်းမှူးရာထူးကြောင့် ခြစားလို့ ရတာမဟုတ် …
တယက ဥက္ကဌ ရာထူးကြောင့် ခြစားလို့ ရတာ …
ဆိုလိုတာက အာဏာသိမ်းထားတော့ ….
စစ်တပ်ရာထူး အပြင် …
အရပ်ဖက် စီမံခန့် ခွဲမှုကို တွဲယူရတယ် …
အာ့မှာ လစ်ကုန်တာပဲ ….
တကယ်တန်း ပြောရရင် …
စည်းလွတ်ဝါးလွတ် လာဘ်စားမှု မသမာမှုကြီးတွေက …
ထောက်လှမ်းရေး မရှိတော့တဲ့…
၂၀၀၄ နောက်ပိုင်းမှ စတယ် …
ဒီနေရာမှာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်ချင်တာက ….
၂၀၁၀ လောက်မှာ တပ်က နောက်ပြန်ဆုတ်တော့မှာမို့ …
ထောက်လှမ်းရေး တပ်ဖွဲ့ ကို …
Counter Role မပေးတော့ဘဲ …
သူ့ ရဲ့ မူလတာဝန် Combat Role ကိုပဲ …
လုပ်စေချင်တော့ဟန် ရှိတယ် …..
ဒါကြောင့် စရဖ ကို ပြန်ဖွဲ့ စည်းတဲ့နေရာမှာ ….
အရင်ထောက်လှမ်းရေး စတိုင် …
ဒေသတစ်ခုမှာ တိုင်းမှူး နဲ့ထောက်လှမ်းရေးတပ်မှူး ….
အပြိုင်ထားရှိတဲ့ စနစ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး …
အသစ်ဖွဲ့ တဲ့စရဖ တပ်မှူးကို …
တိုင်းမှူးအောက် ထိုးထည့်လိုက်တယ် …
တိုင်း စရဖ G1 ကိုယ်တိုင်က …
တိုင်းမှူးအောက်မှာပဲ ရှိတော့ …
Report မှန်သမျှဟာလဲ …
အရင်လို ထိပ်ပိုင်းကို တိုက်ရိုက်မတင်ရတော့ဘဲ ….
တိုင်းက တစ်ဆင့်သာ တက်ရတော့တယ် ….
ဒါဟာ အခု ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း …
တိုင်းမှူးက အရပ်ဖက်ရာထူးကို ….
မကိုင်ရတော့တဲ့အခြေအနေအတွက် ….
ဒေသတွင်းမှာ တိုင်းမှူးတွေ အပေါ် …
Check & Balance လုပ်ထားတဲ့….
ထင်ရာစိုင်း ဇာတ်လမ်းတွေ …
အကြီးအကျယ် ပေါ်လာစေခဲ့တယ် ….
မြေကွက် ရာနဲ့ ထောင်နဲ့ ချီပြီး စီမံခန့် ခွဲခွင့်ရှိနေတဲ့….
တယက ဥက္ကဌတွေဟာ ….
သူတို့ လုပ်သမျှ Report ထိုင်တင်နေတဲ့…
ထောက်လှမ်းရေးတပ် တွေ မရှိတော့တဲ့ နောက် …
ဒေသတွင်းမှာ မသမာမှုတွေ အမြောက်အများ …
ဒီလိုပြောလို့ထောက်လှမ်းရေး ကောင်းကြောင်း ….
ထောက်လှမ်းရေးတွေလဲ မသမာမှုတွေ ဖြစ်တာပဲ ….
သို့ သော်လည်း ထောက်လှမ်းရေး ဖြစ်တဲ့ မသမာမှုဟာ…
တယက ဥက္ကဌတွေ ဖြစ်တဲ့မသမာမှုနဲ့မတူ …
ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ …
တယက ဥက္ကဌ တွေမှာက …
Administrative Power ရှိနေလို့ ဖြစ်တယ် …
ဥပမာ ပြောရရင် …
မှောင်ခိုကားကို ပိုက်ဆံတောင်းတာနဲ့…
မြို့ သစ်တည်ဖို့မြေကွက်ဖော်ထုတ်တဲ့ နေရာမှာ …
လာဘ်စားတာ မတူတဲ့သဘောမျိုး ဖြစ်တယ် ….
အရပ်ဖက် စသုံးလုံးတို့ရဲတို့ ကလည်း …
တိုင်းမှူးကို Report တင်ရဲဖို့ နေနေသာသာ …
မော့တောင် မကြည့်ရဲ ….
တင်ရဲတဲ့စစ်သားချင်းကျတော့လဲ ….
ကိုယ့် အုပ်ချုပ်မှု အောက်ကို ဆွဲသွင်းလိုက်ပြီးပြီမို့…
ဒီကိစ္စဟာ နောက်တစ်ချိန် …
ဒီ ၂၂ နှစ် တပ်မတော် သမိုင်းကာလမှာ …
ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ရလာဒ်ကောင်းတွေပေါ်တောင် …
အများကြီး အလွှမ်းမိုးခံခဲ့ ရပြီး ….
အတော် လက်ညိုးထိုးစရာလဲ ဖြစ်ခဲ့ရတယ် …..
ဒီနေ့ မနက် ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့…
အတွေး နယ်ချဲ့ နေမိတာ ….. ။ ။
( Photo - လေ့ကျင့်ခန်း အနော်ရထာ )